Ukunyuka kweRwala kubantu abanoyika ukuwa
Umbuzo: Ndinokunyuka njani ukuba ndiloyike ukuwa?
Ndiyesaba ukuwa ! " kwaye "Yintoni eya kwenzeka xa ndiwela?" yimibuzo emibini yezona zinto eziqhelekileyo kunye nokwesaba okuqala ukukhuphuka xa beqala. Khawukhumbule nje ukuba abaninzi abakhwelayo, nangona abanamava, ngokuqhelekileyo abafuni ukuwa.
Ukwesaba ukuwa kungokwemvelo kunye nesisiseko somntu. Enye yezoyiko isenza siphila kwiimeko ezimbi.
Asifuni ukuwa ngoba xa senza, sinokulimala okanye sife. Ukuba unesabi ukuwa, mhlawumbi ukunyuka akuyona imidlalo efanelekileyo kuwe. Ukwesaba kwakho ukuwa kuphile-ungalokothi ulibale loo nto. Igcina ubuyela ekhaya ephila.
Funda iNkqubo yokuKhusela iNkqubela
Okokuqala ukwesaba ngokuwa kudla ngokuba ungayiqondi indlela yokukhusela okanye ungathembeli iqabane lakho lokunyuka. Hamba ukhwela kunye nomlingane onamava okanye isikhokelo esilungileyo kwaye ufunde indlela ukukhupha izixhobo kukugcina ukhusele. Funda ukubopha kwintambo . Funda indlela yokubetha . Funda indlela yokwenza ukhuseleko lomngane wakho kunye nawe. Funda izakhono zokunyuka kunye nendlela onokuziphendulela ngayo ukhuseleko lwakho kwaye awuyi kunxhalaba malunga nemiphumo yokuwa.
Thembela Izixhobo Zakho kunye neBelayer
Yonke into esiyenzayo xa sikhuphuka ngamatye, njengokubeka izinto zokukhusela okanye ukukhahlela kwiibhotshi , kwaye zonke izixhobo esisisebenzisayo zenzelwe ukunciphisa imiphumo emibi.
Ukuba uwela ephakamileyo kwaye ungasebenzisi ngokufanelekileyo ukusebenzisa izixhobo zokukhwela, ngoko uya kulimala. Kufuneka ufunde ukuthembela kwezixhobo zakho, intambo, kunye nomculi wakho, oza kunye nokuphuma ekhwela kwaye ufunde indlela inkqubo yokukhusela isebenza ngayo.
Xa uya kukwenyuka, ekugqibeleni uya kulahla kwintlambo.
Ukuba ukhwela umzila okanye ngaphezulu kwekhono lakho, uya kuwela ngexesha elithile. Ukuba ungumqali, oko kufuneka ukwazi kukuba awuyi kuba kude kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo awuyi kuwela emhlabathini xa usebenzisa izixhobo zokukhuphuka. Uya kufakwa kwinqwelo yokunyuka kunye nentambo ephakamileyo yokunyuka iya kuqhotyosheliswa kuma-anchors aqinileyo ngaphezu kwakho, ukwakha i-sling-shot shot-rope, kunye nokubophelwa kwinqanaba lakho kunye ne-kne-in knot engenakuze ikhutshwe.
Ngaba iRope iyahlukana?
Umbuzo omnye ndiwuvayo rhoqo xa ndithatha ukukhuphuka kokuqala kubangelwa ukwesaba ukuwa-Ngaba intambo iyahlukana? Iingcingo nje aziphuli. Kulungile, ezinye ziye zaziwa ngokuba ziphule kodwa intambo ihlala ityunyiwe kwicala eliphambili ngaphambi kokuphula. Izindophi zokunyuka zenzelwe ukubamba ubuninzi bezitofu ezi-static, ubuncinane ubunzima bama-6,000, ngoko ke ngaphandle kokuba ulinganise kakhulu indlovu okanye iVolkswagen Bug ke akufanele ukhathazeke malunga nentambo yokuphuka kunye nesisindo sakho esincinane.
Yamukelani ukuba ukunyuka kwamanzi kuyingozi
Ukuba ukwesaba ukuwa, samkela ukuba ukunyuka kuyatshisa. Thembela izixhobo zakho, intambo kunye nomlingane okhulayo. Yakha ubudlelwane obuqilileyo kunye neqabane lakho kwaye uya kubathemba ngokucacileyo ukunyamekela wena xa ukhwele.
Gxininisa ekukhuphukeni okuhamba ngaphezu kwakho. Musa ukubheka phantsi uze uzibuze "Yintoni eya kwenzeka xa ndiwa?" Le yindlela eqinisekileyo yokuzicima. Esikhundleni sokuba wenze iinjongo ezinje, "Ndiza kukhwela kwinqanaba elilandelayo ndize ndihlale apho." Thatha ithawule kwaye ungesabi ukuhlehlisa emhlabathini xa uyika. Kwaye usebenzise ukuwa.
Ewe, weva ukuziphatha okulungileyo. Ininzi ewayo oyithathayo iya kuba yintambo ephezulu , ekhuselekile kwiinqwelo ezingaphezulu kwakho. Ukuba ukwesaba ukuwa, ke umlayini wakho ubambelele kwaye uvumele uhambe uze uphume. Yabona, akubi kakhulu. Intambo ilula kwaye iyakubamba. "Akukho Dili enkulu!" ushilo uze uzibuze ukuba yonke into ephikisana ngayo yokuwa yayisondele.
Imibuzo emine yokunyuka esuka kuChris Sharma
Ukwandisa iPalette yakho kwaye Ufunde indlela yokuPenda ngeNkuni
Kungakhathaliseki ukuba Ungubani Omkhulu, Ufuna Amakhono OkuCoding
Intshayelelo ekuguquleleni nasekuchazeni
Llamas kunye neAlpacas
Ukubhengezwa: Ukutshintsha intsingiselo ngeLizwi lokuxinezeleka
Funda ngeNtaba yaseSahara
I-Atlatl Spear Thrower - I-Technology ye-Hunting Technology yase-Old Age eyi-17,000